Лайки: 572 728
Всего реакций: 580 313
Ooredoo Myanmar 06.04.2018 01:30
ရေး…… အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ သင်္ကြန်ရောက်တော့မယ်နော်… ဒန်ဒန့်ဒန်
ကဲဖို့ အဆင်သင့်ဘဲလား (ဒါမှမဟုတ်) အိမ်ထဲမှာဘဲအေးဆေးနားမှာလား ?
ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ အူရီဒူးသုံးစွဲသူတွေ ပိုပြီးပျော်ရဖို့ သင်္ကြန်အထူးအစီအစဉ်တစ်ခု လာပြီလေ..
နှစ်ကူးအတာသင်္ကြန်အတွင်းမှာ ဒေတာလိုက်ပွဲအစီအစဉ်ကိုဝယ်ယူပြီး မြန်ဆန်တဲ့ အင်တာနက်နဲ့ ဒေတာလည်းသုံး မိနစ်လက်ဆောင်တွေနဲ့ ဖုန်းလည်းအလကားပြောနိုင်မှာဆိုတော့ ဒီထက်လန်းတာဘာရှိသေးလဲ ပြောကြည့် ..
မိနစ်လက်ဆောင်တွေဘယ်လိုရမှာလဲ ? ဥပမာ - ရက် ၃၀ သက်တမ်းရှိတဲ့ 1GB ဒေတာလိုက်ပွဲကို ၁,၄၉၉ ကျပ်တည်းနဲ့ ၀ယ်လိုက်တာနဲ့ ဒေတာအပြင် အူရီဒူး အချင်းချင်းခေါ်ဆိုဖို့ မိနစ် ၂၀ ပါ လက်ဆောင်တစ်ပါတည်း ရရှိမှာပါ။ ဒေတာ လိုက်ပွဲ အစီအစဉ်တိုင်းအတွက် မိနစ်လက်ဆောင်တွေရမှာနော်။ ဒီတော့ ဒေတာဝယ်ပြီး ဖုန်းငွေလက်ကျန်မရှိတော့လို့ ဖုန်းခေါ်ဖို့အဆင်မပြေမှာလည်းပူစရာမလိုတော့ဘူး..
ပရိုမိုး၇ှင်းကာလက ဧပြီ ၆ ရက်နေ့ကနေ ၂၀ ရက်နေ့အထိဘဲဆိုတော့ အခုပဲ *140# ကိုခေါ်ဆိုပြီး နှစ်သက်ရာ ဒေတာလိုက်ပွဲအစီအစဉ်များကိုဝယ်ယူကာ မိနစ်လက်ဆောင်များယူကြပါစို့။ အသေးစိတ်များကို http://ore.do/lite1m မှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Yayyy.. Thingyan Festival is just around the corner! Are you ready to go wild or are you planning to chill at home?
Ooredoo hasaspecial promotion for you during Thingyan to make this festive season even more fun!
Buy Data LitePwel from the 6th to 20th April, and get the fastest Internet data along with bonus on-net minutes!
Dial *140# now to stay connected easily with your family and friends during Thingyan.
Choose your favourite packs and enjoy your bonus minutes. For more details, visit http://ore.do/lite1e
Лайки: 274 469
Репосты:2608
Всего реакций: 283 732
Лайки: 219 375
Комментарии:5903
Репосты: 23 715
Всего реакций: 248 993
Лайки: 219 680
Репосты: 13 363
Всего реакций: 236 894
Лайки: 201 903
Репосты: 26 484
Всего реакций: 232 491
Лайки: 211 815
Всего реакций: 213 870
Лайки: 145 775
Комментарии: 10 663
Репосты: 31 960
Всего реакций: 188 398
Лайки: 166 963
Репосты: 8 999
Всего реакций: 178 753
Лайки: 170 647
Всего реакций: 171 400
Лайки: 156 510
Всего реакций: 160 990
Лайки: 141 868
Репосты: 12 498
Всего реакций: 157 336
Лайки: 140 161
Всего реакций: 142 573
Лайки: 137 703
Всего реакций: 141 383
Ooredoo Myanmar 16.04.2018 02:50
သင်္ကြန်ရေစိုစိုမှာ မြူးနေ ပျော်နေကြပြီလား ဘော်ဒါတို့ ၊ သင်္ကြန်ရက်ကလေးတွေကုန်သွားမှာစိုးရိမ်တယ်ဟုတ် …
သင်္ကြန်ပြီးရင်လည်း ပျော်စရာတွေမကုန်သွားရအောင် အူရီဒူးကနေ နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်အစီအစဉ်လေးပေးဦးမှာနော်..
မြန်မာတို့ရဲ့ မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ကူး အချိန်အခါဖြစ်တဲ့ နှစ်ဆန်းရက် ဧပြီလ ၁၇ ရက်နဲ့ ၁၈ ရက်နေ့တွေမှာ E – Load နဲ့ငွေဖြည့်လိုက်ရုံနဲ့ ၂၅% ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်တွေရရှိဦးမှာပါ။
ငွေဖြည့်အပိုလက်ဆောင်ကို (၃) ရက်အတွင်း အူရီဒူးအချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုဖို့ ၊ SMS ပို့ဖို့နဲ့ သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက် တို့အတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်။ နှစ်သစ်မှာဆုတောင်းလေးတွေကို အူရီဒူးရဲ့ အပိုလက်ဆောင်သုံးပြီး ပို့လို့ရတယ်နော်။
အစီအစဉ်ကာလက နှစ်ရက်တည်းဆိုတော့ အခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ဖို့ နီးစပ်ရာဆိုင်တွေမှာ E – Load နဲ့ အနည်းဆုံး ၅၀၀ ကျပ်ကစလို့ငွေဖြည့်ပြီး အပိုလက်ဆောင်တွေကိုရယူကြပါစို့။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသေးစိတ်ကို ဒီမှာ ore.do/om25m
Лайки: 135 052
Всего реакций: 139 303
smartfren 19.04.2018 08:12
Dapatkan kuota Unlimited Smartfren 4G di Samsung J series #JuaranyaInternet #PilihanTerbaikDalamHidupku
Лайки: 138 319
Всего реакций: 138 449
Banglalink Digital 25.03.2018 11:00
বিশুদ্ধতায় থাকুক প্রিয়জন!
ইউনিলিভার Pureit- এ এখন বাংলালিংক প্রিয়জন গ্রাহকেরা পাচ্ছেন ১০% ডিসকাউন্ট। সাথে থাকছে ফ্রি হোম ডেলিভারি এবং ইন…
ইউনিলিভার Pureit- এ এখন বাংলালিংক প্রিয়জন গ্রাহকেরা পাচ্ছেন ১০% ডিসকাউন্ট। সাথে থাকছে ফ্রি হোম ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশন। অর্ডার করতে কল করুন 09613 105 105 এখনই!
Лайки: 132 800
Всего реакций: 134 183
Smart Communications, Inc. 07.04.2018 06:28
Got any plans this season? Plan your activities & make ita#SummerToRemember! Stream your favorite vlogs on YouTube with #SmartVideoTimeOut and enjoy…
Got any plans this season? Plan your activities & make ita#SummerToRemember! Stream your favorite vlogs on YouTube with #SmartVideoTimeOut and enjoy 1 hour of YouTube videos for only P10. Text VIDEO10 to 9999 now!
Per DTI-FTEB Permit No. 10798 Series of 2018
Лайки: 129 315
Всего реакций: 132 349
Лайки: 121 493
Всего реакций: 129 236
Лайки: 124 833
Всего реакций: 127 221
Лайки: 112 408
Всего реакций: 124 353
Idea 01.04.2018 05:30
Celebrate Easter withahost of amazing features with Idea Postpaid Nirvana Plans. #HappyEaster
Know more here: bit.ly/IdeaPostpaidNirvana
Лайки: 122 035
Всего реакций: 122 755
Всего реакций: 119 148
Лайки: 108 128
Всего реакций: 118 264